Galaxy S11 wuxuu ka koobnaan doonaa shan telefoon | Androidsis
Qiyaasta Galaxy S11 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Febraayo 2020 si rasmi ah. Xaddiga nooga tagi doona isbeddelada, sida kaamirooyinka wanaagsan, marka lagu daro qaar baytariyada waaweyn. Sannadkan oo kale, Samsung waxay soo bandhigeysaa dhowr nooc oo ka mid ah xaddidan, si dadka isticmaala ay u helaan fursado dhowr ah oo ay kala doortaan
Xog cusub ayaa horeyba noo sheegaysa tirada taleefannada aan ka filan karno noocyadan kala duwan ee Galaxy S11. Kiiskan, waxaa jiri doona wadar ahaan shan nooc, maxaa yeelay qaar ka mid ah waxay yeelan doonaan laba nooc oo la heli karo, sidii horeyba loogu yiqiin. Kala duwanaanshaha ayaa si aad ah u koraya sidan.
Munaasabadan, taleefannada oo dhan waxay yeelan doonaan nooc leh 5G. Marka laga hadlayo Galaxy S11 Plus, qaabkani wuxuu si toos ah u imanayaa oo kaliya nooc leh 5G. Halka labada nooc ee kale ay yeelan doonaan noocyo kala ah 4G iyo 5G. Samsung ballanqaadkeedii cad ee 5G, kaas oo sii kori doona sanadka 2020.
Tani waxay ka dhigan tahay isbeddel marka loo eego jiilka sannadkan, taas ayaa nooga tagtay qaab leh 5G. Shirkaddu waxay aragtaa sida shabakadaha 5G loogu daad gureynayo adduunka oo dhan, taas oo macnaheedu yahay in ay sii kordhayaan baahida loo qabo aaladda noocan ah. Marka waxay raadinayaan inay is diyaariyaan.
Sidaas waan yeelan doonnaa laba taleefan oo leh 4G iyo saddex leh 5G noocyadan kala duwan ee Galaxy S11. Isbedelka weyn ayaa ah qaabka ugu raqiisan, Galaxy S11e sidoo kale wuxuu yeelan doonaa nooc leh 5G markan. Marka shirkaddu waxay dooneysaa inay ku gaarto tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha qaabkan.
Waxyar ayaan waxbadan ka ogaan doonnaa dhamaadka-sare sare ee sumadda Kuuriya. Kuwani Galaxy S11s ayaa la filayaa in la soo bandhigo ka hor MWC 2020. Warbaahinta qaar ayaa durba tilmaamtay 18-ka Febraayo sida taariikhda diiwaangelintaada, laakiin maahan wax aan si hubaal ah u ogaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xadka Galaxy S11 wuxuu yeelan doonaa shan taleefan